အရှက်တရားမှာ တားဆေးမရှိဘူး - Khit THit Media
ယောက်ျားလေးဘက်က တစ်သက်မှာ ဆော်ဘယ်နှယောက်ထားထား မျက်နှာများတဲ့ စကားကို ဂုဏ်ပုဒ်တစ်ခုလို့ ထင်နေပြီး အထည်အလဲတွဲတတ်သလို တစ်ချို့က ရေကြည် ရေနောက် သောက်မြည်းတတ်ပြီး ဘဝဖျက်ဆီးတတ်သည့် virus တစ်ခုလို ရွံဖို့ကောင်းသည်။
“ရော့ တားဆေးလေး တစ်ပတ်တစ်ခါသောက်နော် “
“ဟုတ်ကိုကို ချစ်ဗိုက်မပေါ်ဖို့ တားဆေးရှိတယ် ကိုပစ်သွားတဲ့အခါ ချစ်အရှက်ရတာ တားဆေးမရှိဘူးနော် အရှက်နဲ့လူလုပ်နေရတာပါ ချစ်တို့က”
နှစ်အတော် ကြာတော့ သူအိမ်ထောင်ကျသွားတယ်။ နောက်တော့ သူ့မှာ သမီးလေးမွေးလာခဲ့တယ်။ တဖြည်းဖြည်း သမီးလေးအရွယ်ရောက်လာတော့ ဒီကောင် ရွှေလိုဥပြီး တန်ဖိုးရှိတဲ့ ကျောက် မျက် ရတနာထက် ဂရုစိုက်ကာ သာယာတဲအိမ်ထောင်ရေးလေးပိုင်ဆိုင်နေပါတယ်။
ကိုယ့်ဟာကျ တုန်နေအောင်နှမျောတတ်တဲ့ ဖခင်မေတ္တာနဲ့ ကုန်နေအောင် ချစ်ပြနေတယ်။ သမီးကညာ အပျိုပေါက်ဖြစ်ပြီး တစ်နေ့တော့ စစ်ပွဲကြီးတစ်ခု ကြုံလိုက်ရတယ်။
မဟုတ်ဘူး မဟုတ်ဘူး ကွာ သူကငါ့သမီူးကို အပျော်ကြံတာ ငါသိတယ်ငါပြန်ဝဋ်လည်တာ ဟူးး!!!;;;”
“ငါရှက်တယ် ကွာ ငါအရမ်းရှက်တယ် ငါ့အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာ ဘယ်လိုမျက်နှာပြရမလဲ သမီးမိုက် ငါ့မျကိနှာကို အိုးမဲသုတ်တယ် တောက်!!”//
“အရှက်တရားမှာ တားဆေးမရှိဘူး တစ်သက်လုံး ငါဒီစကား ငါ့နားမှာ ကြားလို့ ငါနောင်တရပါပြီကွာ ;;(ငိုနေလျက်)
လူတစ်ယောက်အတွက် အရှက်တရားမှာ တားဆေးမရှိ။
သိက္ခာမဲ့ သူဟာ ဘဝနိမ့်ကျမှုအတွက် ရာနှုန်းတစ်ဝက်သေချာနေပါပြီ။
Previous Article ၀ါးစိမ်းတောင်မှာ သတ္တုတူးဖော်ခွင့်ပေးဖို့ MIC ထံ ယန်စီကုမ္ပဏီ တင်ပြ
Next Article မန္တလေး မဟာမုနိ မှ ဟိန္ဒူ နတ်ဒေဝါကြေးရုပ်ကြီးများ